दुर्गाथली बलात्कार घटना : डीएसपी खड्का भन्छन्, टोली गठन गरेर अनुसन्धान हुँदैछ..! - Kantipath.com
दुर्गाथली बलात्कार घटना : डीएसपी खड्का भन्छन्, टोली गठन गरेर अनुसन्धान हुँदैछ..!
काठमाडाैं । बझाङ जिल्लाको दुर्गाथली गाँउपालिका वडा नम्बर ६ कि एक ३५ वर्षीया महिलालाई स्थानीय देव जाग्रीले बलात्कार गरेको आरोप लागेको छ ।
यस घटनाबारे बझाङ जिल्ला प्रहरी कार्यलयका प्रमुख (डीएसपी) रुपक खड्कासँग कुरा गर्दा अनुसन्धानकाे लाागी टाेली गठन गरेकाे कान्तिपथ डटकमलाई बताए । यस घटनामा काे-काे जाेडिएका छन् । छिटाेभन्दा छिटाे जानकारी दिन्छुभन्दै पन्छिएका छन् । बलात्कार प्रयासका आरोपीत देब जाग्री भने अहिले खुलियाम हिडिरहेका छन् ।
विभिन्न सञ्चार माध्यमबाट समाचार प्रकाशन भएपछि जिल्ला प्रहरी कार्यालय बझाङले बलात्कार प्रयासको आरोप लागेका जाग्रीलाई बोलाएको थियो । तर जाग्रीलाई बोलाएर ठोस कदम भने डीएसपी खड्काले पनि लिएको देखिदैन ।
जाग्री जिल्ला प्रहरी कार्यालय पुगेर फेरि गाउँ फर्किसकेका छन् ।
बलात्कार प्रयासको घटना हातपात मात्रै भएको भनेर प्रहरी चौकिमा मिलापत्र गराउने इलाका प्रहरी कार्यालयका इन्चार्ज महेश धामीलाई पनि जिल्ला बोलाएको भनेर डिएसपी खड्काले बताएका थिए ।
घटना बलात्कार प्रयास नै भएको भनेर पुष्टि गर्ने आशयको दुर्गाथली गाउँपालिका अध्यक्ष प्रयागराज जोशीले बोलेको अडियो हिजाे अथात् भाद्र १० गते कान्तिपथ डटकमले सार्वजनिक गरेकाे छ ।
उक्त अडियाे कान्तिपथकाे पेजबाटै सार्वजनिक भएकाे आफूलाई समेत थाहा भएकाे र अनुसन्धानका गाली टोली गठन गरेकाे डीएसपी खड्काले बताए ।
अडियाे सार्वजनिक हुँदा पनि डिएसपी खड्काले परिणाममुखी कदम नलिनुले सरोकारवाला कतै जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा पनि इलाका प्रहरी कार्यालय कै स्थिति दोहोरिने होकी भने शङ्का गरिरहेका छन्।
उक्त घटना इलाका प्रहरी कार्यालय दुर्गाथली चौधारीले मिलापत्र गरेको हो । स्थानियले करिब ३ लाखको लेनदेनमा घटना सामसुम पारिएको दाबी गरि रहेका छन् ।
स्थानिय शालिभान जाग्रीको बयान यस्तो छ, असार २५ गते साँझ करिब ७ बजे स्थानिय पविता जाग्रीले गहुँ चुट्ने भाड बाली सुकाउन बनाइएको सानो टहरो भित्र कोही कराएको सुनिन् । भित्र गएर हेर्दा देव जाग्री र ती महिलालाई आपत्ति जनक अवस्थामा देखिन् ।
पवितालाई देख्ने वित्तिकै देव जाग्री कपडा च्यापेर भागे । ती महिलाले आफुलाई जर्बजस्ती करणी गर्ने प्रयास गरेको बताइन् । गाउँमा हल्लाखल्ला भएपछि देव जाग्रीका खोजी सुरु भयो । वडाध्यक्ष लगाएत सबैले फरार जाग्रीलाई खोज तलास गरे तर फेला परेनन् । त्यती बेलासम्म गाउँमा बलात्कार प्रयास भएको घटना देश विदेशमा धुवाँसरी फैलिसकेको थियो ।
पिडित महिला सहित उनका श्रीमान् विरजित जाग्री, भतिज लालबहादुर जाग्री र मकर जाग्री उजुरी दिन भन्दै सदरमुकाम चैनपुरसम्म पुगे । तर घटना भएको चौथो दिन फरार भनिएका जाग्रीलाई एकाएक प्रहरीले स्थानिय बजार विनायकबाट पक्राउ गरिएको बतायो र चैनपुर पुगेका पिडित महिलासहित उनका आफन्तलाई तुरुन्तै इलाका प्रहरी कार्यालयमा हाँजिर हुन भनेर प्रहरीले नै फोन गर्यो ।
प्रहरीले ती महिला र उनका आफन्तलाई जर्बजस्तीकरणी भएको प्रमाण के छ ? पछि तपाईहरुलाई नै गाह्रो पर्ला तुरुन्त यता आउनु भनेर धम्कीपुर्ण भाषा प्रयोग गरेको नाम नखोल्ने शर्तमा महिलाका एकजना आफन्तले भने ।
उजुरी दिन चैनपुर पुगेका पिडित महिलाका आफन्त पनि उजुरी नदिएरै फर्किए । प्रहरी सहयाक निरिक्षक महेश बहादुर धामी, स्थानिय अगुवाहरु र पिडित महिलाका श्रीमानबीच करिब एक घण्टाको गोप्य बसाइपछि घटनाले स्वरुप परिवर्तन गरेको महिला कै एकजना आफन्त बताउँछन् ।
एक घण्टाअघि सम्म जर्बजस्ती करणी प्रयास भनिएको घटना एक घण्टापछि सामान्य हातपातमात्र भएकाे भनेपछि उनि पनि अचम्म परेको बताउँछन् ।
उक्त घटनाक्रम सँग जोडिएको विषयमा कुराकानी भएका केही अडियोहरु विषेश स्रोतबाट कान्तिपथ डटकमलाई प्राप्त भएकाे अडियोमा प्रश्नकर्ताले गाउँपालिका अध्यक्ष प्रयागराज जोशीलाई चुवावनको जर्बजस्ती करणीको केश के भयो अध्यक्ष ज्यू भनेर सोधेका छन् ।
जवाफमा गाउँपालिका अध्यक्ष जोशी भन्छन्, ‘असइ महेश बहादर धामीलाई मिलापाँजो मिलापत्र हुने भए त्यसलाई देव जाग्रीलाई चेतावनी दिएर मिलाउनु नभए अगाडि बढाउनु भनेको छु । वडाध्यक्ष धिरज जाग्रीले पनि देव जाग्रीले अरु काम पनि विगारेको छ भनेको थियो । म विरामी भएर धनगढी आएको छु । असईलाई त्याँ भन्या छु ।’
उक्त डीएसपी खड्कासंग कुराकानी गरेकाे अडियाे कान्तिपथ डटकमसंग सुरक्षित छ……!
Previous Previous post: चोरीका २४ मोटरसाइकल ट्राफिक महाशाखाद्वारा सवारी धनीलाई हस्तान्तरण
Next Next post: निर्वाचन आयोगविरूद्ध अदालत जाने एमालेको तयारी
कांग्रेस सांसद बलदेव शर्माको निधन
काठमाडौँ परिसरको नेतृत्व एसएसपी अशोक सिंहलाई